CLC 2014: Manao Sora-miafina Ho An’ireo Teny Tsy Hita Loatra Amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Jona 2018 9:12 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Martsa 2014)
[Mandefa mankany amina pejy amin'ny teny anglisy daholo ny rohy rehetra.]
Fahazoandalàna avy amin'ny blaogy Global Bative Networks no nahazoana namerenana namoaka ity lahatsoratra ity.
26 taona lasa izay, nanontany mikasika ny politikan'ny fisoloana tena tao anatin'ny andrany taorian'ny fanjanahantany nanan-tantara nataony i Gayatri Chakravorty Spivak; “Can the Subaltern Speak?”[”Afaka miteny ve ireo Olompehezina?”]. Naveriko novakiana ilay andrana rehefa nahafantatra aho fa nisy atrikasa hatao mba hanomezana fitaovana ahafahan'ireo mpampiasa ny teny tsy dia fantatra loatra hampahafantatra ny teniny amin'ny alalan'ny teknolojia niomerika. Amin'ny fotoana nahatonga ny oniversitem-pahavaratra 2014 ”Manao sora-miafina ho an'ireo fiarahamonin'ny fiteny” ho vintana manan-danja hamoronana sehatra niomerika andraisan'ny rehetra anjara mismisy kokoa, afaka miala amin'ireo raikipohim-pitenenana sy fitiavantena tandrefana nanamarika ny fotoana izay mifehy ny aterineto ve izy io?
Milaza amin'ny fomba hafa an'i Spivak, manontany aho : Afaka manao sora-miafina ve ireo Olompehezina?”
Tsy zavamiafina fa teny vitsivitsy no mifehy ny sehatra an-tambajotra. Lahatsoratra iray navoakan'i András Kornai tamin'ny volana oktobra farany teo tamin'ny gazety PLOSOne (antsoina hoe “Digital Language Death” [Ny Fahafatesana Ara-niomerikan'ny Teny]) no nampita fa latsaky ny dimy isan-jaton'ny tenim-pirenena erantany amin'izao fotoana izao no no hita anaty tambajotra.
Tsy an-tambajotra, eo amin'ny teny 7.776 eo no ampiaisana isanandro. Mba hametrahana hoe firy no tao anaty tambajotra, nanamboatra fandaharanasa mba hamaritana ireo sehatra fototra ao amin'ny tranonkala sy hitanisàna ny isan'ny voanteny isaky ny teny i Kornai. Mampiseho ny ”porofon'ny fahapotehana goavana nateraky ny fivakisana niomerika” ireo vokatra, hoy i Kornai.
Rehefa ampifanatrehana amin'ny tarehimarika, sarotra ny tsy hamehy fa mampaharitra mandrakizay ny fahasimbàna ara-drafitry ny mponina indizeny ireo fitaovana niomerika vaovao. Raha toa matetika mitondra tombontsoa goavana ho an'ireo fiarahamonina eo an-toerana amin'ny andavanandrony, fahasalamana sy fitandroana ny kolontsainy ny teknolojia vaovao, dia voafaritra amin'ny teny hafa ny ‘fifandraisan'izy ireo, lalàna momba ny fizakàmanana ara-tsaina, fenitra ara-kolontsaina momba ny fizaràna sy ny fifandraisana. Noho izany, ny Aterineto — sy ireo mampivelatra izany — dia mampaharitra hatrany ity herisetra raiki-tampisaka ity, izay manafaingana ny fahasimban'ireo fomba tsy an'ny tandrefana tsy hahita masoandro.
Atreho ny oniversitem-pahavaratra 2014 CIDLeS: Manao sora-miafina ho an'ny fiarahamonin'ny fiteny, fihaonana izay mikendry ny hanome ny tsirairay fahafahana handray anjara amin'ny sehatra niomerika amin'ny teniny manokana. Araka ny tranonkalan‘ny CIDLes, hamory vondrona mpandray anjara telo ilay fihaonana :
ireo mpandahateny izay ankehitriny dia tsy mbola fantatry ny teknolojia ara-teny ary maniry ny hampiasa ny tenin'izy ireo amin'ny fitaovana elektronika;
ireo mpianatra teny sy taranja mifandray amin'izany ka te-hianatra ny famokarana rindrambaiko;
Ireo mpamorona rindrambaiko ary mpianatra informatika liana mba hanohana ireo teny tsy dia hita loatra an-tambajotra amin'ny alàlan'ireo fitaovana teknolojika.
Ny oniversitem-pahavaratra izay hatao ny 11 hatramin'ny 15 Aogositra ao amin'ny “Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros” [PT] akaikin'i Minde, any Portiogaly, dia mamory ireo anarana lehibe sasany amin'ny sehatra vao misondrotry ny fahamaroan'ny teny an-tambajotra. Izy ireo no ho mpanoro hevitra ireo mpandray anjara amin'ilay oniversitem-pahavaratra.
Ohatra, i Kevin Scannell, fantatra kokoa noho ny tetikasany Indigenous Tweets, dia hanampy ireo mpianatra ”hanova vatan-drakitra ho mpanitsy tsipelina diso.” Hianaran'ireo mpianatra ireo ny fomba atao hahitana, hanazavana sy hanaovana sora-miafina ireo rakitra ireo amin'ny alalan'ny tranonkala, ary avy eo, hamoronana lisitra fijerena fiverimberenana, hanampiana ny haiendrika, mba hamokarana fanitarana ho an'ny Firefox/OpenOffice.
Bruce Birch, mpandalina ny fiteny ary miasa amin'ireo teny ao anatin'ny fianakavian'ny teny Iwaidjan tenenina any amin'ny tanin'i Amhem [faritany Avaratra, ao Aostralia], dia hiasa hamokatra fampiharana iray ho an'ny finday ho fanangonana sy fizaràna rakitra iaraha-manao. Hita ao anatin'ireo heviny ny fampiharana ho an'ny angondrakitra momba ny voambolana, angona fomba fiteny, tantara sy rakitra hafa avy amin'ny fiteny tandindonin'ny fanjavonana. Ho fantatrareo ny fomba famokarana bankinà angondrakitra ho an'ny votoaty sy ny fomba atao hamelàna ireo mpampiasa hamoaka sy hizara votoaty avy amin'izy ireo.
Mpiasa-miasa iray ao San Fracisco, injiniera informatika, no niteny tamiko indray andro ”hanafaka antsika ny fanaovana sora-miafina.” Mety tsy hiombon-kevitra amin'izany i Spivak — izay tonga tamin'ny tsoakevitra hoe tsy afa-miteny ireo olompehezina . Nilaza izy fa na ireo ezaka am-pitiavana be indrindra ataon'ireo manam-pahaizana mba ‘ hanomezana feo ireo tsy manam-peo’ aza dia tsy maintsy nisoratra tao anatin'ny sehatrana tetikasa fanjanahana iray nivelatra kokoa. Azon'i Spivak atao tsikera toy izany mikasika ny firotsahan'ireo manam-pahaizana amin'ny teknolojia, na dia amin-katsaran-tsitrapo aza, mba hieritreretana sehatra fanehoana an-tambajotra ho an'ireo olona natao an-kilabao. Amin'ny fampiasana ireo fomba atolotry ny CLC 2014 ireo, azontsika atao ve ny mampiditra lahateny mifanohitra amin'ireo lahateny mibahan-toerana eo amin'ny resaka niomerika ao Sillicon Valley?
Maro ny fomba fanao malaza ao amin'ny Aterineto (imailaka, Fecebook, Twitter, sns) no mbola mijanona ho fomba ara-tsoratra fotsiny ihany; na izany aza, misy fiteny indizeny sasany ary vitsy an'isa no mahita ny fomba fiteny amin'ny alalan'ilay teny notononina (jereo ny lahatsoratra vao haingana momba ny Inuktitut sy Twitter). Ahoana no ahafahana mieritreritra sehatra niomerika mampandray anjara bebe kokoa ka manome toerana sady ho an'ny teny tenenina no ho an'ny teny soratana?
Farany, amiko dia toa lasa dingana voalohany ilaina ny CLC 2014 ho fanamboarana fiforonana mpandahateny vitsy manam-pitaovana mba hamelabelarana fitaovana niomerika izay mifanaraka amin'ireo fiteny ireo. Manoloana ity ”fanjavonan'ny fiteny maro” ity, tsaratsara kokoa ny manilika an'i Spivak aloha ary ny mihetsika mba handinihana loharanonà sora-miafina vitsivitsy.
Noho izany, afaka manao sora-miafina ve ireo olompehezina ? Mankahery anareo hanoratra anarana amin'ny CLC 2014 aho ary haka tsoakevitra avy amin'izany.
Tsindrio eto raha te-hahafantatra bebe kokoa mikasika ny oniversitem-pahavaratra ”Manao sora-miafina ho an'ny fiarahamonin'ny fiteny” na fenoy dieny izao ilay taratasy fandraisana anjara. Raha mila fanazavana bebe kokoa, mifandraisa amin'ny clc2014@cidles.eu.